တဖြေးဖြေးနဲ့ ပိုမိုပူပြင်းလာတဲ့ရာသီဥတုကြောင့် သင့်နေအိမ်ထဲကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အပူ ဒဏ်ကို ကာကွယ်တားဆီးဖို့အကောင်း ဆုံးနည်းလမ်းကတော့ SCG Insulation ကိုတပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။
ယနေ့လူအများအသုံးပြုနေကြတဲ့ အပူကာပစ္စည်းများစွာထဲမှ Glass Wool နဲ့ Rock Wool ရဲ့ကွာခြားချက်တွေကတော့
1. သဲနှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောဖန်များကိုအသုံးပြုပြီး ထုတ်လုပ်ထားခြင်း
5. ကျောက်ဂွမ်းမှုန့်မပါဝင်ခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးမထိခိုက်နိုင်ခြင်း တို့ဖြစ်ပြီး
5. ကျောက်ဂွမ်းမှုန့်ပါဝင်ခြင်း တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
SCG Thermal Insulation အပူကာပစ္စည်းကို Fiber Glass Wool များဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Glass Wool ဆိုသည်မှာ ဖန်နှင့် သဲကိုရော၍ အပူချိန် 1450’C တွင်အမျှင်လေးများဖြစ်အောင် ပြုလုပ် ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ဓာတု ဗေဒပစ္စည်းပါဝင်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖြစ်အောင်ပြု လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းဖန်ချည်မျှင်များထဲရှိလေအိတ်တွေက ပြင်ပက လာတဲ့အပူတွေကိုလျှော့ချပေးခြင်းဖြင့်ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ဒါကြောင့်၎င်း glass wool ကို အမိုးဖြင့်တွဲဖက်၍သော် လည်းကောင်း၊ မျက်နှာကျက်ပေါ် တွင်လည်းကောင်း နံရံများကြားတွင်ထည့်သွင်း၍သော်လည်းကောင်း အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အပူဒဏ်ကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ပြင်ပမှအပူစီးဆင်းမှုကိုလျှော့ချပေးနိုင်သည့်အတွက် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေသုံးစွဲတဲ့ မီတာခကိုလျော့ကျစေ ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်တပ်ဆင်ရလွယ်ကူပြီး ဖိအားဒဏ်ခံနိုင်အားကောင်းမွန်သည့်အပြင် ရေစိမ့်ဝင်မှုမရှိအောင်လည်း ကာကွယ်ပေး နိုင်လို့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။